Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/03/2020)
Otú ọ dị, nke mode nke iga bụ kacha mma? na Save A Train, anyị na-N'ezie abụchaghị eziokwu na-eche na ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ nnọọ elu ụdị njem! Gụọ na n'okpuru iji chọpụta ihe dị mma ka anyị na amaba n'ime anyị post of ụgbọ okporo ígwè njem vesos ụgbọelu njem.
Ọ dịghị nsogbu oge
Air njem a maara na-otu nke kasị ụzọ ruo gị ebe, Otú ọ dị, Nke a bụ nanị na-ewere na ụgbọ elu na ya echiche. Olee otú tupu nke ụgbọ elu gị na-eme ị na-abata ịgafe ogologo ego-na na obi iru ala akara? Ọ bụrụ na ị na-enyocha na a akpa ị ga-eche na-anakọta nke a mgbe ị na-abata - a na-ewe oge. N'adịghị ka ọdụ ụgbọelu, na n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè e nweghị ego-ins ma ọ bụ nche edoghi, otú ị na-adịghị na-na ebe awa tupu gị njem. kasị isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-emi odude ziri ezi obi nke obodo ha na-ejere. Ukwuu n'ime mgbe ị na-ụgbọ okporo, ị na-abata kpọmkwem na ị na-aga. Otú ọ dị, na-ewere a ụgbọelu, ị pụrụ iji ọtụtụ awa na-na na si n'ọdụ ụgbọ.
Ọ bụrụ na ị kwụrụ maka azụmahịa na klas, gị ohere a na-emekarị nanị na ihe ụgbọelu oche. On a ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike ịkwaga ebe ọzọ kpamkpam, na ị ga-enwe ihe legroom gburugburu gị oche. Mgbe gị na ụgbọ elu, ị ga-eche maka oche belt ịrịba ama agbanyụ ịkwaga si oche gị. Otú ọ dị, na a ụgbọ okporo ígwè na ị na-akpali ala aisles, nwụchiri a ụfụ ma ọ bụ kọfị, na-ekiri ụwa na-aga site na. A sinik ụgbọ okporo ígwè pụrụ ọbụna ịbụ a ezumike. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all ụgbọ elu.
Train njem-enye gị ohere ịga comfortably na gị adored Pita. ọtụtụ anu ulo na-adịghị ruru eru ka ikuku njem n'ihi ahụ ike, afọ ma ọ bụ ghara ịdị.
njem na European ụgbọ oloko nwere ike buru nkịta, nwamba na ndị ọzọ ụmụ obere anụmanụ na ha na ọtụtụ ndị oge na adịghị mmezi ụgwọ!
Maka ozi ọzọ, Soro Save A Train on Facebook, Instagram Account na Twitter Accounts.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)